Hanti Ma guurtada & Isdhexgalka Warbaahinta Bulshada | Martech Zone
Sabti, Febraayo 20, 2010 Axad, Oktoobar 4, 2015 Adam Yar
Doug ayaa ku sheegay qoraal uu dhawaan soo qoray sida uu u adag yahay isdhexgalka iyo otomaatigga ayaa fure u noqon doona suuqgeeyayaasha emaylka. Waxaan la shaqeyneynaa wakiillada guryaha 'Real Estate' waana taas waxa ay dalbanayaan. Waxyaabo dhowr ah oo ay tahay inaad ka ogaato waxyaabaha ku saabsan guryaha:
Wakiilada guryaha ma ahan farsamo yaqaanno mana lahan waaxda IT-ga si ay u soo wacaan markay caawimaad u baahdaan. Iyagu waa ganacsato, si dhakhso ah u qaataan tiknoolajiyada, oo had iyo jeer cabbira saameynta. Badanaa waa suuqley aad u casrisan - maxaa yeelay dakhligooda ayaa ku tiirsan.
Wakiilada guryaha la shaqeynta marmar Kharash kasta oo lagu sameeyo iibiyaha suuq geynta ama tikniyoolajiyadda cusub waa lacag ka baxsan faa iidada ay ku leeyihiin guriga la iibiyay. Natiija ahaan, waxay aad uga taxaddaraan aaladaha ay qaataan, sida ugu fudud ee loo isticmaali karo, iyo saameynta ay ku leeyihiin iibka.
Natiijo ahaan, waxay nagu kiciyeen inaan horumarinno saacad kasta. Waxaan hadda si toos ah ugu riixeynaa "Liistada maalinta" macaamiisheena guryaha Facebook derbiga iyo Twitter durdur Tani waa mid ka mid ah liisaskooda waxayna ku xiran tahay a dalxiis dalxiis in aan u martigalino macmiilkeena. Markii aan soo saarnay muuqaalka, waxaan hubin sida ay saaxiibbada soo-dhaweynta u noqon laheyd inay ku arkaan liis gareynta guryaha derbigooda.
Isbedelay, aad u soo dhaweyn! Qaar badan oo ka mid ah wakiilladayada waxay helaan faallooyin ku dhowaad maalin kasta. Kama soo wada jeedaan koox dad ah mararka qaarna ma ahan nooca faallooyinka uu iibsaduhu doonayo inuu maqlo (sida "u baahan in la nadiifiyo") laakiin wakiilka guryaha kireeya ee joogitaanka maskaxdu waa mid aad muhiim u ah iyo wadahadal socda oo ku saabsan liistadooda ayaa korka ku haysa.
Our adeegga suuq geynta guryaha waxaa hadda lagu dhex daray Twitter, Youtube (waxaan si firfircoon uga soo saaraynaa fiidyowyada sawirada liisaska), iyo adeegyada isku-darka Diiwaangelinta Dhismooyinka. Natiijooyinka waxay ahaayeen kuwo cajiib ah - macaamiisheennu waxay arkeen qiyaastii 25% kororka tirada aragtida bogga ee ku saabsan dalxiisyada dalxiis, qoraalka soo galaya iyo weydiimaha bilaashka ah. Jawaabtan ayaa xoogaa iga yaabisay oo si cad u muujisay sida isku dhafka warbaahinta bulshada ee dadaalka suuqgeyntaada (xitaa ganacsiga leben iyo hoobiye aad u weyn) ay saameyn weyn ku yeelan karto astaantaada.
Waa tan mid ka mid ah otomaatiga Fiidiyowyada Youtube Real Estate:
Qaybta ugu wanaagsan ee tan waa in macaamilku awood u leeyahay inuu dhammaantood sameeyo - WordPress, Mobile, Twitter, Facebook, Youtube - dhammaantood hal guji oo jiir ah. Looma baahna inay galaan codsi kasta si madax-bannaan markasta - waxay awood u siin karaan isku-darka koontada hal mar ka dibna si otomaatig ah ayey u daabacaan. Waxaan diyaarinay fiidiyoow muujinaya waxqabadka.
Tags: macluumaadka guriga dhijitaalka ahhantida maguurtadawakiilka guryaha ijaarkasuuq geynta guryahadalxiisyo dalxiiswarbaahinta bulshadasuuq geynta guryaha bulshada ee warbaahinta bulshadadalxiis dalxiis